Wararka - Guddoomiyaha Xafiiska Goodtone POLY ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Dahabiga 2021
Guddoomiyaha Xafiiska Goodtone POLY ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Dahabiga 2021
Abaalmarinta Naqshadeynta Pin Dahabiga waxaa lagu aasaasay Taiwan 1981. Hadda The Machadka Cilmi-baarista Naqshadeynta Taiwan(TDRI) waxay qabtaa abaal-marinaha iyo qorshaynta xafladaha abaal-marinaha iyo hawlaha la xidhiidha. Meelaynta cusub ee 2014: abaal-marinaha naqshadaynta ugu sarreeya ee suuqa Shiinaha ee caalamiga ah, helitaanka fikradda warshadaha naqshadeynta Shiinaha. Astaanta Abaalmarinta Pin Design Award ee Dahabiga ah waxay dejisay Abaalmarinta Nakhshadeynta Pin Dahabiga, Abaalmarinta Naqshadeynta Fikradda Dahabiga ah iyo Abaalmarinta Pin Design Award saddexda tartan ee Grand Prix ee kooxaha bartilmaameedka ah ee kala duwan tan iyo 2015, ujeedadeedu waxay tahay in lagu ammaano alaabada naqshadeynta hal-abuurka leh iyo shaqooyinka.
Iyada oo loo marayo aqoonsiga xirfadeed ee Abaalmarinta Naqshadeynta Dhibcaha Dahabiga ah, shirkadaha waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay ku dhejiyaan muhiimadda naqshadeynta alaabta iyo horumarinta si loo kordhiyo qiimaha astaanta leh awoodda naqshadeynta.
Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay sidoo kale bixisaa shahaado naqshadeed oo tayo sare leh macaamiisha iyo suuqa, taas oo kor u qaadeysa wacyiga dadweynaha ee qiimaha naqshadeynta iyo qurxinta naqshadeynta, iyo si wadajir ah u abuurista tayada nolosha.
Kursiga POLY ee xafiiskawuxuu si fiican isugu daraa farsamada iyo bilicda xafiiska. Waxaa dhiirigeliyay walxaha joomatari ee adduunka bannaanka, qaababka saddex-geesoodka ah ee isku xiran iyo farsamooyinka tolida waxay isku dhacaan qaabab badan, iyagoo soo bandhigaya saameyn saddex-cabbir ah oo u eg.